Seranam-piaramanidina Surat Thani ~ Journey-Assist - Seranam-piaramanidina
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Jeografia, seranam-piaramanidina, famindrana manerana an'i Thailand » Seranam-piaramanidina Surat Thani
Seranam-piaramanidina ao Surat Thani (URT - Seranam-piaramanidina Surat Thani). Thailand
Famaritana ny seranam-piaramanidina Surat Thani (URT - seranam-piaramanidina Surat Thani). Thailand
Surat Thani serivisy mifandray amin'ny antsipirihany sy torolàlana
Sary sy famerenan'ny seranam-piaramanidina Surat Thani (URT - seranam-piaramanidina Surat Thani)
Scoreboard an-tserasera amin'ny seranam-piaramanidina Surat Thani
Surat Thani. Fijerena ny seranam-piaramanidina
Ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenen'i Surat Thani dia hita eo akaikin'ny (21 km) miaraka amin'ny tanànan'ny anarana mitovy ihany koa Surat Thani (Surat Thani). 80 km ihany koa. avy any Don Sak Pier, toerana fitaterana lehibe raha mandeha amin'ny seranam-piaramanidina mankany Koh Samui, Phangan ary Tao.
Io no hany seranam-piaramanidina any atsimo Thailand manompo fiaramanidina lafo vidy. Amin'ny tranga rehefa mila mankany Samui avy any Bangkok ianao, ary avy eo mankany Phangan avy any Samui, dia tokony hividy tapakila eny amin'ity seranam-piaramanidina manokana ity ianao.
Fa eo amin'ny fitsangatsanganana bus sy ny fiampitana amin'ny zotra, miampy ny ferry io dia maharitra mandritra ny andro. Ity seranam-piaramanidina ity dia manana habe kely sy tsy misy fotodrafitrasa serivisy fananganana.
Na izany aza, ny fifanakalozana fifanakalozana, fivarotana, angamba ho an'ny fanofana fiara ao anatiny. Raha eny amin'ny lalana mankany Samui ianao, avy eo dia mandehana mankany amin'ny counter izay misy soratra hoe Raja Ferry. Avy eo ianao mividy tapakila bisy mankany amin'ilay sambo ary mankany amin'ilay sambo.
Ny ferry farany dia niainga tamin'ny 19.30. Raha mandeha anaty bus handeha an-tongotra mankany amin'ny seranana dia efa ho adiny iray sy sasany.
Tranonkala ofisialin'ny seranam-piaramanidina - https://www.suratthaniairport.com
Ny fijanonana fiara ao amin'ny seranam-piaramanidina Surat Thani
adiresy: 73 Moo 3, Hua Toei, Distrika Phunphin, Surat Thani, Thailand
telefaonina: + 66 87 444 8860
Seranam-piaramanidina Suvanaphum amin'ny sarintany, ary antsipiriany momba ny fifandraisana
Hevitra momba ny seranam-piaramanidina Surat Thani (famerenana Google)